Hada laga bilaabo waxaad la wadaagi doontaa nuxurka Adobe ee Microsoft Word | Abuurista khadka tooska ah
Haddii aad tahay isticmaale Microsoft Word iyo PowerPoint (kan aan ahayn…), waa inaad ogaataa in Adobe maanta ku dhawaaqay isdhexgalka maktabadaha Creative Cloud ee labadan barnaamij ee loogu tala galay otomaatiga xafiiska iyo baahiyaha kale.
Xayaysiis dhan oo ay lahaan karaan kuwa hal-abuurka ah ee adeegsada aaladda Adobe toobiye ka mid ah Microsoft Word iyo PowerPoint. Waxaan aragnay wax la mid ah Dropbox iyo astaamahaas oo noo oggolaanaya inaan si toos ah ula wadaagno waxyaabaha mid ka mid ah xalka ugu fiican ee daruuraha.
Hadda waa waqtigii dhammaan ka tirsan shirkad ama hay'ad si dhakhso leh ayey u geli kartaa waxyaabaha ay uga baahan yihiin dukumiintiyada Ereyga iyo bandhigyada PowerPoint. Hadafku waa in la yareeyo dadaalada lana wanaajiyo qulqulkaas iyadoo la suurta gelinayo wada shaqeynta kooxaha.
Adobe ayaa daabacday fiidiyoow muujinaya sida isdhexgalkaan u shaqeeyo inta udhaxeysa maktabadaha Creative Cloud iyo labadaas barnaamij ee Microsoft dukumiintiyada xafiiska iyo bandhigyadaas oo waxtar badan u leh dhammaan noocyada shirkadaha, kuwa madaxbanaan, shirkadaha iyo isticmaalayaasha. Waxaan soo sheegnay is-dhexgalka Dropbox si aad si fiican u fahmi karto sida ay u shaqeyso, laakiin waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad daawato fiidiyowga wax ka badan 1 daqiiqo iyo 30 ilbiriqsi oo uu si fiican ugu shaqeynayo
Qalab isku dhafan oo waxtar u yeelan doona kuwa ay tahay inay raacaan khadadka qaabeynta ama luqadda nooc gaar ah. Haatan waa inaan sugnaa ilaa la geynayo. Waqtigaas waxaad awoodi doontaa inaad ku gasho shaqadaas oo aad awood u yeelan doonto inaad ku keento waxyaabaha hal-abuurka leh naqshado ku sameeya Adobe, sida astaamo, barnaamijyo, iyo waxyaabo kale dukumiintiyadaas Word ama bandhigyada PowerPoint.
Una Adobe oo gacanta ku wada leh Microsoft inaad si dhaqso leh noo keento Adobe Fresco-kaaga weyn, app sawir si loola tartamo ProCreate.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Adobe wuxuu ku dhawaaqayaa isdhexgalka tooska ah ee Microsoft Word iyo PowerPoint